Iingcamango zePhysical Science Fair Projekthi
I-Physics neKhemistry Iingcamango
Ukuzama ukufumana isihloko kwiprojekti efanelekileyo yenzululwazi ingaba yinto enzima njengoko iphrojekthi ngokwayo. Ukunceda umntwana enze isigqibo malunga neprojekthi engabandakanyi indleko enkulu, ukulawula rhoqo okanye ingozi yokutshisa indlu akufuneki ukuba yinto engenakwenzeka. Iiprojekthi zeeprayimari ezisekuqaleni akufanele zifundiswe kodwa zikhawuleze kwaye zihle. Iiprojekthi ezinkulu zihlala ziphendula umbuzo, kunokuba kuboniswe umboniso okanye ukubonisa.
Khumbula ukuba le projekthi ingumntwana wakho, masiyidlale nayo. Nalu uluhlu lweengcamango ezilishumi zokunceda ukugqitha inzima yokuqala.
Ukwenza i-kite kumnandi kwaye kulula. Ukongeza umsila kwi-kite yongeza uzinzo. Ingaba umsila omdala wenza i-kite fly fly? Zama ubude obuhlukeneyo bomsila okanye uguqule inani leemisila.
Iiparachutes - Ukugxotha izinto zezesayensi.
Yenza iiparachuthi ngeengxowa zerhasi kunye nomgca wokuloba. Jonga ukuba iiparachubhu ezinkulu zibhetele kuneeparachutes ezincinci. Ngaba iiparachubhu zesikwele ezingcono kuneenxa zonke? Imicu emide ingcono kuneemichilo ezimfutshane?
Yenza i-pendulum elula kumtya kunye nokuloba. Ukuhluka kobude bomtya kuthintela njani ixesha? Yongeza ubunzima obuninzi uze ubone oko kwenzayo.
Ukugijima umunwe wakho ngeglasi yewayini ukwenza ithoni ihlala izonwabisa. Ingaba ithoni iyatshintsha xa usebenzisa i-liquids ezahlukeneyo kwiglasi? Khangela ukuba ukhangele ukuba ukutshintsha inani lombane litshintsha ithoni.
Iibhaluni kunye noMbane oMandla.
Ukuba usibhobhole ibhaluni ezinxamnye neenwele zakho okanye i-sweatshiya yeboya, unokwenza umbane onamandla okwaneleyo ukuba unamathele ibhaluni eludongeni. Zithatha ezininzi iirubs kule nto? Ngaba iibhaluni ezigcweleyo zithatha ngokutsha okanye ngaphantsi? Ngaba uhlobo lweenwele luyalubuza?
Esinye isahluko se spaghetti kulula ukuphula. Ukuqokelela iziqendu eziliqela kunye kunokuxhasa ubunzima obuninzi. Yenza iimfumba ze-spaghetti ukwenza imipu ebeka izihlalo ezimbini okanye iitafile. Hlaba indebe phakathi kwendonga ye-spaghetti kwaye wongeze iinqwelo zokuloba okanye i-bolts de ikhefu. Ngaba ibhuloho yakho isomelele xa ubopha i-spaghetti ngomtya, i-glue, i-tape okanye ama-rubber bands? Zama i-pastas eyahlukeneyo. Ngaba i-spaghetti ephangaleleyo inamandla kuneenxa zonke?
I i electromagnets.
Unokwenza i-electromagnet elula kunye nebhethri yelanga, ucingo lobhedu kunye nesilumkiso. Gubungela ucingo malunga nesilumko ezininzi kwaye udibanise iziphelo kwii-terminals zebhethri. Sebenzisa umbane ukuthabatha izifowuni zesebe. Ukwandisa inani lemimoya kwaye ubone ukuba umlinganiselo wokupakisha umbane wakho uthatha utshintsho.
Ukuba ubeka iqanda kwisitya samanzi, iqanda liza kucima. Ukuba ungeze ityuwa emanzini, iqanda liya kuqala ukuthambisa. Kuthatha ityuwa elingakanani ukuthambisa iqanda phezulu kwamanzi? Kuthekani ukuba usebenzise ushukela endaweni yetyuwa?
Watt malunga nama-bulb?
Iibhola zokukhanya ziza ngeendlela ezininzi, ubukhulu kunye namanzi. Kuthetha ukuthini ukuthambisa? Ngaba ama-bulb aphezulu asebenzayo ashushu? kukhanya?
Bonke abenzi bebhetri bathi ibhetri yabo ihlala ixesha elide. Kutheni ungaziboni? Ngaba ibhetri ebiza ngakumbi? Ngaba uphawu oluthile luvela?
Uvavanye amandla wamatrabagi, iifologi zevenkile, okanye iiplastiki.
Othobekileyo Kuzo Zonke.
Yiyiphi i-dent whitener eyona nto ibhetele ekususeni amacwecwe kunye nokugcoba? Unokutshabalalisa itayilisi okanye enye impahla kunye nekhofi, itiye, amajikijolo, umsi, njl., Uze uqhathanise amandla amhlophe ahlukeneyo. Zama into efana neyokuhlamba impahla yokuhlamba okanye yokuhlamba.
Ukubamba inwele yentloko yomntu kunye nedayi kwiindawo ezahlukeneyo ezinombala ofanayo wee-haircolor, ngaphandle kweempawu ezahlukeneyo. Geza i-wig uze ubone ukuba yeyiphi umbala ohlala. Ingaba nayiphi na imibala itshintsha utshintsho? Awunayo inwele yentloko yomntu? Zama uboya okanye ezinye iinwele zezilwanyana.
Thatha Iprojekthi Yenzululwazi Yakho Yezaphulo ukuya kwiNqanaba Elilandelayo
Projects Light Light
Iiprojekti ze-6 zeBakala leNzululwazi
Amakristal aphezulu aseGoodx
Iqoqo leCristal Recipes Collection
Amachiza eTyuwa neVinegar
Indlela yoHlelo lweeNgcaciso zeNzululwazi
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi 'Sortir' (ukuphuma)
Umbono wamaYuda ngokuzibulala
Ezi Ziimpawu Ezihle Kakhulu Zeminyaka Eli-2010-2020
South Korea | Iinkcukacha kunye neMbali
Imiyalelo yokuLawula i-Hammer-On
Imfazwe ka-1812: Intuthuko eMntla kunye neNkunzi yaseMntla
Ziyindleko Kangakanani Ukufumana Isisu?
Abasebenzi kwiSaziso seMculo
Qu Gore Quotes
Gqibela iprogram (igrama)
Uncedo luka Kathryn Stockett
Indlela yokwenza amanani eLichtenberg
Iinkolelo zamaLuthere kunye neZenzo
Iingcebiso ezi-4 zeKholeji yokuKhutshwa kweKholeji elide
Funda ukuba ungene njani kwi-Skateboard
I-Mala Rosary Prayer Beads eSikhism
Iidemon zamaGrike - iindawo zokuhlala kwiiNkcubeko zamaGrike zaMandulo
Izihlobo ezidumile zikaJerry Lee Lewis
Liyiphi Umhla Weveki Yomhlaba?
I-10 yeyona nto ibalulekileyo ye-Aztec oothixo kunye noodadekazi
Abongameli abaselula kwiUnited States
UTrieu Thi Trin, iVietnamkazikazi waseVietnam yaseVietnam
Oko Ukwenza Xa Umntwana Enyamezela Ukuxhaphazwa KwamaYuda eSikolweni
Ngaba uT Tom Hanks 'uYise weNkokeli yoMculi weDayimani?
I-Flutophone Isixhobo seCandelo